Sanbaloolshe ma wuxuu ka shalaynayaa hadalkii uu sida geesinimada leh uyiri? - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Sanbaloolshe ma wuxuu ka shalaynayaa hadalkii uu sida geesinimada leh uyiri?
Sanbaloolshe ma wuxuu ka shalaynayaa hadalkii uu sida geesinimada leh uyiri?
September 3, 2019 Duceysane1546
Kadib waraysi uu todobaadkaan gudihiisa uu siiyay dalsan tv taliyihii hore ee hay’ada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Amb cabdullaahi maxamad cali sanbaloolshe ayaa maanta war bixin kale oo qoraal ah lasoo wadaagay bulshada soomaaliyeed
Sanbaloolshe waraysigiisa waxyaabaha uu uga hadlay murankana dhaliyay ayaa ahaa arimaha siyaasada qabaliga ah sanbaloolshe ayaa sitoosa u qeexay in uu nin hawiye ah larabo kursiga madaxwaynaha ee soomaaliya
Waraysigaas ayaa muran badan ka dhex dhaliyay bulshada siyaabo kala duwana waa loo qaatay bale fariintaan oo uu qoray sanbaloolshe laftiisa ayuu markale ku qeexay hadafkiisa siyaasigaa iyo ujeedkii uu kalahaa hadalkaas iyo sida looqaatay
Halkaan hoose ka akhriso qoraalka sanbaloolshe
Asc dhaamaan aqyaarta halkaan ku jirta. Waxaan rabaa in halkaan ka sameeyo point of clarification oo ku saabsan wareysi aan siiyay Dalsan TV oo abuuray buuq iyo qilaaf fara badan guud ahaan Soomaalida dhexdeeda gaar ahaan baraha bulshada. Waxaan cadeynayaa in aan ku hadleynin magac Xisbi iyo mid qolo kale toona. Waxaan cabiraayey fikirkeyg shaqsiga oo kaliya.
Waxaan ka xumahay in dad badan oo Soomaaliyeed ay dhibsadaan hadalkeyga. Waxaan rabaa in aan xaqiijiyo in aanan waligey qof Soomaaliyeed qabyaalad ku dhibaateyn. Humaaga iyo sawirka aan ka heystana ma ahan mid fiican oo waxaan ku faani karaa oo aan hubaa in aan ahay qof leh niyad fiican oo Soomalinimo ka buuxdo. Waxaan rabaa in aan cadeeyo in dhamaan qabaa-ilka Soomaaliyeed aan u haayo ixtiraam iyo kalsooni weyn. Marnaba ma rabo in la ii fahmo in aan xurmo daro iyo xaqiraad ku sameeynayo qabiil Soomaaliyeed. Waxaad dhamaantiin xasuusataan doorashadii 2017 markii dowlada Ethiopia laheyd hala doorto kaliya qof ka socda qabiil hebel mowqifkii aan qaatay oo ahaa mid ka dhan ah beesha aan ka soo jeedo.
Waan hubaa in Dad badan oo maanta warkeyga wax ka sheegaya ay maalintaas aa-musnaayeen. Malaha ayaga ayaa faa’iido ku qabay. Sababta aan go’aankaas u qaatayna waxa ay aheyd in aan loo kala tegin oo loo helo dad wax isku cesha. Ayada oo taasi jirto hadana ma fiicana mana ahan in aan iska indha tirno xaqiiqda nagu xeeran oo ah in uu jiro umada kasta ra-yi hogaan u ah oo micneheedo yahay in Soomalidu qabyaaladeysantahay. Anigu waxa aan la hadlaayey dadka ka soo jeeda constituencygeyga mana garan karaan mana dareemi karaan waxa iga guuxaya aniga oo aamusan. Waxaan kaliya oo aan tusaaleynayey in dhibku ku soo haray deegaanadooda oo ilaa xad deegaanada kale ee Soomaaliyeed hagaageen amaan ahaan iyo maamul ahaanba ayna tahay in ay boorka iska jafaan. Waa hubaa taas in Soomalida kale dani ugu jirto. Waxaan jecelahay nolosheeda in aan arko Soomaaliya oo wanaagsan oo leh dad isku qanacsan iskuna tanaasula. Ma rabo in la ii arko qof raja beel abuuraya laakiin hadana waa in aan ogaanaa in umadaha guuleystay aysan aheyn kuwo is maaweeliya ee waxa ay aqbalaan in ay wajahaan isla markaasna ka hadlaan dhibta hortaala taas oo aan iska hadal iyo afka oo malab la marsado lagu bedeli karin. Anigu waxaan aamisanaha in aan ahey qof ku qanacsan qofnimadiisa oo aqbali kara qaladkiisa ma qaldame waa ilaahay. Ma ahi qof waxayaabaha qaarkood ay saameyn ku yeeshan sida dacaayada iyo cadaadis la saaray. Laakiin waan aaminsanahay in ay muhiim tahay in la gar qaato.
Gabagabadii waan aamisanahay in uu qabiilku wax xun yahay laakiin ma yeelayo in dadka ay dhahaan ama u dhaqmaan sida I n qabiilkoodo qaran yahay kan dadka kalena qurun yahay. Reer habelow ha yeelina in la idin dhaho qabiilkiina aasa kuwa kalana ha la xoojiyo. Kuligeyn aan isku kaashano in aan dhisno Soomaliya oo mid ah oo aan dhamaanteen ku nasano kuna helno nolol diiran oo aan la heyn dhibaato. Waa hubaa in aan himiladaas quruxda badan gaari karno.
Dabeeciyan ma ahi qof qucdad qaba sidaa daraadeed ha I cafiso dhamaan intii hadalkeyga dhibsatay ana waan cafiyey intii wax na kala gaareen. Qabiil ma fiicna laakiin inta laga wada tagaayo kaaga ha ka tegin oo yaan la idin gaadin qaraabo
Soomaaliya ha ka guuleysato dhamaanteed. Hawiye ha guuleysto aamin wada dhaha
Waa walaalkiin Cabdullahi Maxamed Cali (Sanbalolshe)
Banaan baxyo looga soo horjeedo xariga wasiir janan oo kasocda jubooyinka
Agaasimihii hore ee madaxtooyada hirshabeele oo Al-shabaab isku dhiibay
Madaxwayne Laftagareen oo xilka ka qaaday qaar kamida wasiiradiisa
February 24, 2020 Duceysane